Indlela Yokuhlinzwa Kwembuzi – The Ulwazi Programme
Ukuhlinzwa kwembuzi kwenziwa ekhaya uma kunomsebenzi ohlanganisa amadlozi. Kungaba isendaweni yaselokishini, edolobheni noma emaphandleni uma labo bantu bekholelwa emadlozini kufanele bakwenze futhi bakulandele ukuhlinzwa kwalesisilwane.
Kusetshenziswa ummese obukhali ukwenzela ukuthi umuntu ozoyihlinza angayizwisi ubuhlungu kodwa kusheshe lokho akwenzayo. Uma imbuzi ihlinzwa ibanga umsindo okuyiwona lomsindo abantu abakholelwa ukuthi ubaxhumanisa namadlozi abo. Abanye abantu bayaye bayihlabe uma behlangane nje bewumndeni ukwenzela ukuthi babe nenyama eningi noma eyenele.
Imvamisa abantu abahlinza imbuzi kufanele babe bane kodwa uma bengenele nabantu ababili bangayihlinza uma bekwazi ngoba kudinga ukuthi babambisane ngesikhathi omunye ehlinza. Kusetshenziswa ummese nendishi yokukhongozela igazi ngoba liyaphekwa nalo ukuze linga chithekeli phansi. Abanye bake basebensise nento ethize ukundlala phansi ukuze kuthi uma sebeyisusa isikhumba noma beyebula inyama ingabhuquzi emhlabathini. Kuye kube uthayela noma uqwembe oluqinile. Uma seyihlinzwa kusikwa emqaleni ngaphambili noma ngaphansi engileni. Bayilinde ize ithule kuba isikhathi esincane esilindwayo. Bese beyayilula ukwenzela ukuthi iqonde ngoba njengoba kade iphuma umphefumulo mhlawumbe ibisifinyela yama ngenye indlela. Bayilula ngokuthi omunye abambe izinyawo zangaphambili omunye zangemuva. Bese beyibeka kulento abazohlinzela kuyo. Abantu ababili baba ngasenhloko ababili babe ngasemanqineni angezansi. Uyedwa umuntu osikayo abanye babambile. Baqale ukwebula isikhumba sembuzi ukuze kusale inyama yodwa, lowo ophethe ummese usika isikhumba ngasenqineni bese edonsa ngeminwe kuxebuke isikhumba kuze kuphume ngomlenze kwehlele emzimbeni wayo imbuzi, baphinde basike kusuka esifubeni kuyo phuma emilenzeni yangemuva, baphinde baxebule ngeminwe kuze kuphume ngomgogodla wayo imbuzi.
Isikhumba babeka phezu kwaso inyama, bese bekhipha isisu namathumbu nenyongo namaphaphu nokunye okuyisikhwanyana okuthiwa yingobe noma inanzi. Kuthiwa uma kuhlatshwe ngoba kwenziwa umsebenzi othize kumele igadwe leyonto ngoba abantu abadala bahlala kuyo, kule sisikhwanyana kusuke kukhona ubulongo obuthize, lesosikhwanyana sidliwa wogogo noma amakhehla noma izingane. Ngelinye ilanga sekudlule umsebenzi sekusele abomndeni wodwa iyadliwa, ngoba isuke ibekiwe ngokuyifihla ngoba abantu basaphithizela. Umuntu omdala uyayikhipha ubulongo abomise ebugadile bese egeza lento ebihleli lobulongo iphekwe idliwe. Ubulongo lobu buyasetshenziswa uma bezokhuluma empephweni yabo, yibo obubaxhumanisa nabadala basekhaya uma becela izinto. Nenyongo bayisebenzisa kuthi iphaphu lidliwe nesibindi, amathumbu wona ayagezwa bese ephekwa ahlanganiswe negazi. Inyama yomzimba yona iyaphekwa ngomlilo waphansi ngamanzi nosawoti kubile ndawonye, ubuchopho buphekwa kanye nenyama kodwa bona buphekwa bufakwe kuplasitiki bubile nenyama yonke. Amanqina aphekwa wodwa, aphekelwe izingane nekhanda lihlukaniswe kukhishwe izimpondo sichonywe ensikeni yomnyango, inyama yona iphekwe idliwe.
Uma kukade kuyinyama nje abazihlabele ngokuthanda siyomiswa kahle isikhumba, ngaphakathi lakade kunenyama khona baye basihuqe ngosawoti ukuze singahlalwa yizimpukane, bese besimweba elangeni besindlale phansi bashayelele ngezipikili singasikwa. Uma sesomile sisebenze ukuba umata noma bazihlalele kuso emthunzini noma balalise abantwana kuso. Kodwa uma ekade kuyimbuzi yomsebenzi mhlawumbe khona okade efakwa isiphandla noma ebonga into ethile ayenzelwe abadala uyasifaka isiphandla. Isiphandla sisikwa kulesikhumba. Kusikwa umucu olingene bese uhlukaniswe phakathi nendawo bese umuntu kufakwa yilowomuntu oqondene nomsebenzi. Ukuze singabi nephunga isiphandla kuye kudingeke ukthi usuhhuqe ngomlotha, noma usiwashe ngensipho eyimpuphu bese usihuqa ngempuphu.
This article gives details of how a goat is slaughtered for ancestral ceremonies and how the meat is cooked, and also what is done with the skin.